FAMPIANARANA Richmond Intl Airport FSX & P3D - Rikoooo
Mpanoratra: mpanoratra maro any Shehryar Ansari
Ny seranam-piaramanidina dia mizara momba ny fiaramanidina 105,000 isan-taona. Ny serivisy amerikana lehibe indrindra
manompo ny seranam-piaramanidina ary ny ankamaroany dia mamatsy ny atody ho an'ny fifandraisana an-tserasera. Ny seranam-piaramanidina dia manana fisehoan-dàlana goavana Fedex sy UPS.
Betsaka ny FBO sy ny sidina eo an-toerana no misy eto amin'ny seranam-piaramanidina, ary ny Pro-Medica dia miorina eo amin'ny seranam-piaramanidina fiara fitaterana an'habakabaka. Ireo rehetra ireo dia modely eo amin'ilay toerana.
Ny National National Reserve dia manana ny toerany eo amin'ny zoro SE ao amin'ny seranam-piaramanidina.
Ny Mozea Aziatika Virginia dia modely any amin'ny faritra avaratry ny seranam-piaramanidina (misy SR71 sy F14 dia miorina ao).